मास्कको प्रयोगले निम्त्याउन सक्छ यस्तो खतरा, सतर्क हुनु आवश्यक - Nepal Page Nepal Page
पुस २३, २०७७ बिहीबार
मास्कको प्रयोगले निम्त्याउन सक्छ यस्तो खतरा, सतर्क हुनु आवश्यक
काठमाडौं, २३ पौष । कोभिडको जोखिमबाट बच्नका लागि हालको समयमा मास्क लगाउनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।
मास्क राम्रोसँग नलगाउँदा यसले सङ्क्रमणको जोखिम मात्र बढाउँदैन । लामो समय मास्क लगाएको कारण छालामा समस्या, दन्त समस्या र सास फेर्न गाह्रो भएकोसमेत रिपोर्ट गरिएको छ । अब भने लामो समय मास्क लगाउँदा आँखाका लागि समस्याग्रस्त पनि हुन सक्ने देखिएको छ ।
पहिले, मान्छेहरूले मास्क लगाएका कारण चश्मामा बाफ जम्ने समस्याका बारेमा गुनासो गर्दै आएका थिए । तर, हालै देखा परेको समस्या योभन्दा जटिल छ । आँखाको समस्या स्पष्ट रूपमा मास्क गलत तरिकाले लगाएका कारणले उत्पन्न हुने गर्छ । नाकबाट बाहिर निकालिएको तातो हावाले आँखामा सजिलै असर गर्न सक्छ ।
मास्क राम्रोसँग फिट नहुँदा न्यानो श्वास बाहिर निस्कने हुन्छ जुन मास्कको माथिबाट जान्छ जसकारण आँखा सुख्खा हुन्छ । यसले सजिलैसँग प्राकृतिक आँसुलाई सुक्खा गरी ड्राइनेस सुक्खापन निम्त्याउन, आँखाको जलनका कारण र अक्सिडेटिभ तनाव बढाउन सक्छ । यसबाहेक, लामो समयदेखि मास्कको ब्याक्टेरियल आँखी भौँ सङ्क्रमण, कर्नियल क्षति, मास्कलाई धुँदा प्रयोग गरिएको डिटर्जन्टबाट एलर्जी जस्तो जलन हुन सक्छ ।
अर्को सिद्धान्तअनुसार आँखाको जलन महामारीसम्बन्धी तनाव र चिन्ताको कारण पनि हुन सक्छ । लामो समयसम्म डिजिटल स्क्रिन हेर्दा पनि आँखा सुक्खा हुने लक्षण तथा पोल्ने हुन सक्छ । यसलाई रोक्नका लागि डिजिटल स्क्रिनबाट नियमित ब्रेक लिनुपर्छ । अनुहारमा राम्रोसँग फिट हुने मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ । आँखामा कहिले पनि हात लगाउनु हुँदैन ।
हातमा विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्, जुन आँखामा गई जलन र सुख्खापनको कारण हुन सक्छन् । आँखाको जलनलाई शान्त पार्नका लागि सफा कपडालाई न्यानो पानीले भिजाई आँखामाथि केही मिनेट राख्न सकिन्छ । पानीको न्यानोपनले आँसु ग्रन्थीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जसले आँखामा बढी तरल उत्पादन गरी आँखालाई सुक्खा हुन दिँदैन । यदि समस्या लामो समयसम्म जारी रहेमा डाक्टरकोमा जान जरूरी हुन्छ ।
भूकम्पबाट बच्न र बचाउन दृढ सङ्कल्प आवश्यक : गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं, २ माघ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पबाट बच्न र बचाउन सबैमा दृढ सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘बहुप्रकोपीय विपद्मा
नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ लाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति
‘नागरिक एप्स’ को प्रयोगबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछ : प्रधानमन्त्री ओली
पर्सा जिल्लामा जन्मजात मोतिविन्दुका आठ बिरामी फेला
पर्सा । अत्यन्त दुलर्भ मानिएको जन्मजात मोतिविन्दु रोगबाट ग्रसित आठजना बिरामी पर्सा जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने
तपाइको राशि के हो ? हेर्नुस यि ३ राशि भएका युवती, जसले पुरुषलाई पहिलो भेटमै फिदा बनाउँछन्
काठमाडौं, २४ पौष । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार १२ राशि हुने गर्दछन् । यी १२ राशि
यी ११ सपना : जसले मानिसको मृत्युको संकेत गर्छ
काठमाडौं, २१ पौष । राति सुतेको बेला हरेक मान्छेले सपना देख्ने गर्छ । भने सपनाले
अपनाउनुस ४ मन्त्र, रहनुस जीवनभर स्वस्थ र खुशी
काठमाडौं, २१ पौष ।स्वस्थ जीवन को चाहँदैन ? को चाहन्छ बारम्बार बिरामी भएर अस्पतालमा लड्न
दियोको भरमा वर्षौं बित्यो, बलेन बिजुली
काठमाडौं १७ पौष । पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–५ मा रहेको तमागर लघु जलविद्युत् आयोजनाका काम अहिलेसम्म पूरा
चाडपर्वअनुसार खानाले पौष्टिक आहार प्राप्त हुने
काठमाडौं, १६ पौष । गण्डकी प्रदेशसभा, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले चाडपर्व आत्मियताका
यसरी राख्नुहोस् जाडोमा स्वास्थ्यको ख्याल
जाडोमा हाम्रो शरीरका मांसपेशीहरु खुम्चन्छन् । यसले रगतका नसाहरु साँघुरिन पुग्छ । नतिजा, उच्च रक्तचाप